शिक्षण पेशामा पनि यति धेरै तलव ! जानकारी लिनुहोस सरकारी शिक्षकहरुको तलब सूचीसहित – ताजा समाचार
शिक्षण पेशामा पनि यति धेरै तलव ! जानकारी लिनुहोस सरकारी शिक्षकहरुको तलब सूचीसहित
विद्यार्थीलाई ज्ञानको ज्योति बाँढ्ने शिक्षकले महिनामा कति तलव बुझ्छन् ? धेरैको जिज्ञासा हुन्छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अनुसार शिक्षकको तलब यसप्रकार छ ।
कुन तहका शिक्षकको तलव कति ?
माध्यमिक प्रथम : ४०,१५० देखि ४७,३७७ रुपैयाँ सम्म
माध्यमिक द्वितीय : ३४,२२० देखि ४०,३७९ रुपैंयाँ सम्म
माध्यमिक तृतीय : ३०,५०० देखि ३५,९९० रुपैयाँ सम्म
निमावि प्रथम : ३२,१०० देखि ३७,८७८ रुपैयाँ सम्म
निमावि द्वितीय : ३०,५०० देखि ३५,९९० रुपैयाँ सम्म
निम्न माध्यमिक तह तृतीय : २३,५०० देखि २८,२०० रुपैयाँ सम्म
प्रावि प्रथम : ३०,५०० देखि ३५,९९० रुपैयाँ सम्म
प्रावि द्वितीय : २३,५०० देखि २८,२०० रुपैंयाँ सम्म
प्राथमिक तह तृतीय : २२,१७० देखि २६,६०४ रुपैयाँ सम्म
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ । बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलववृद्धि गरेका हुन् ।
सरकारले विभिन्न पदमा फरक-फरक अनुपातमा आधारभूत तलब बढाएको छ । नायव सुब्बासम्म २० र त्यसमाथि १८ प्रतिशत तलब बृद्धिको घोषणा भएको हो । अब सबैभन्दा तल्लो तहका पियनले न्यूनतम २२ हजार ८ र माथिल्लो तहका मुख्यसचिवले ६५ हजार १३६ रकम पाउनेछन् ।
सरकारी तलब भत्ता खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पनि तलब वृद्धि हुन्छ ।
यो वर्ष तलब बढाउन सरकारी कर्मचारीले सरकारमाथि दबाव सिर्जना गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको थियो । आव २०७४/७५ मा तलब बढेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पोशाक भत्ता र अन्य केही भत्ता बढाइएको थियो ।
यसपालि तलब नबढे त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक विकृति बढ्ने तर्क गर्दै विभिन्न कर्मचारी संघ संघठन र युनियनहरुले सरकारलाई दबाव दिइरहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले पनि कर्मचारीको तलब बढाउने प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने विषयमा धेरै नकारात्मक थिएनन् । उनैले माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब बढी अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
गत साता निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगीको तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बुझेको सो ज्ञापनपत्रमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्युनतम् २ गुणाले र मुख्य सचिवको तलब ३ गुणाले बढाउन माग गरिएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा परिवहन भत्ता, खाजा भत्ता, शैक्षिक भत्ता र घरबहाल भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो ।
बढेको तलब कति हुन्छ हेर्नुहोस् तालिका :